Akwụkwọ ikike afọ iri
Afọ iri abụọ a pụrụ ịdabere na ya
76 Set Dornier akpa ákwà igwe
N'ime usoro 950 na agba
Ebe Sunshine di, enwere Groupeve.
N'ihe ngosipụta Sun Shade Sunscreen Mesh Curtain ...
Kasị Popular faiba glaasi Sunscreen Fabric 5% ...
Di iche iche Choice Roller Blinds Fabric Semi Blackout
Eco-Enyi na Enyi Antibacterial Blackout faiba glaasi Fabric ...
Multi-acha Ugboro abụọ oyi akwa Blinds Fabric 100% ...
Ahaziri Fashion Shangri-La Blind Fabric ...
High itinye n'ọrụ Rate Zebra Ikebe Fabric 100% ...
AKWAMKWỌ AKW FREEKWỌ AKW FREEKWỌ AKW MKWỌ AKW MKWỌ karịa 650 PATTERNS
Iji gboo mkpa nke mpaghara mpaghara
atụmatụ nkesa akwa
Polyester Ọkara-Blackout Fabric
Faiba glaasi Blackout Fabric
Groupeve bụ ihe okike na-emepụta anwụ na-acha uhie uhie na-arụpụta ihe, R&D na ahịa. Ọ na-abịa na Premium System, ụlọ ọrụ ama ama.
Anwu® OTlọ nkwari akụ
Window & Door reenskwà
Ndị nọ n'ọfịs na-ahọrọ ịnweta anwụ n'agbanyeghị na windo nwere echiche kachasị mma, ikuku, nchebe UV, chọta windo zuru oke na akwa ụzọ nke anyanwụ iji gboo mkpa gị, Sunetex sunscreen fabric mere na vinyl-coated faiba glaasi ma ọ bụ polyester yarn, nke bụ nhọrọ kachasị mma maka ahịa gị na ụlọ ọrụ nrụpụta ụlọ ọrụ.
Sunetex Ime Anyanwụ Control akwa
Groupeve na-enye nke kacha mma Sunscreen Fabric maka windo, ibo ụzọ, na mpụga mkpọchi mkpuchi, nke na-enye nguzozi zuru oke nke ọkụ, ikuku ikuku, nkasi obi, na ịma mma, na-eme ka ha bụrụ ezigbo windo na-ekpuchi ihe ngwọta maka ebe obibi na oghere azụmahịa, yana ihe mkpuchi ụgbọ ala. , ị ga-eche na ị nwere ike ịchịkwa ụwa.
Anwu® Lọ ọrụ
Mụbaa Oge Nzuzo Gị
Nzuzo windo nzuzo bụ ngwọta zuru oke iji gbakwunye nzuzo nzuzo n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs. Choo akwa di elu na nkpuru ohuru, anyi n’enye karia 950pattern maka nchikota. Mee ka azụmahịa ahụ buru ibu maka ire ngwa ime na mpụga gị.
Mee Ka Yourlọ Gị Dịkwuo Mma
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọ 10 afọ quality akwụkwọ ikike ala blinds ákwà ihe onwunwe si China factory, saa mbara gị anụ ụlọ window ọgwụgwọ ahịa ahịa. Sunetex's anyanwụ-control akwa dị mma maka ụlọ ahịa gị na ebe obibi gị na ọnụahịa asọmpi.
2020 R + T Asia Ngosi ...
Ezigbo ndị ahịa: N'ihi ntiwapụ nke COVID-19 oyi baa ọrịa n'ụwa nile na iji pro ...
Zip Track kpaliri ụgbọala ...
Zip Blinds bụ ndị a kacha ewu ewu na South Asia, dịka Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, wdg. Zip T ...
Otu esi agbanwe nwoke gi ...
Ugbu a ụlọ smart bụ usoro kachasị ewu ewu na ihe owuwu ụlọ, ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịgbanwe d ...
2020 Anyị na-aga n'ụzọ mgbe niile.